အသက် ၂၈ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပုံနဲ့၊ အဲဒါတွေအားလုံးဟာငရဲသို့သွားခဲ့ပုံ - မင်းရဲ့ Brain On Porn
ငါစိတ်ဖိစီးနေတဲ့အချိန်ကစပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဟာ adrenal ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိပ်ရာပေါ်ကျပြီးအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်မှာညစာစားလေ့ရှိတယ်။ အရာတစ်ခု၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း / စိုးရိမ်စိတ်နှစ်ခုလုံးကို PMO မဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။
ငါစာသားပြန်ငါ့ကလေးဘဝဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာအရင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ကံကောင်းခဲ့တဲ့သဘာဝအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။ အဲ့ဒါအရမ်းကောင်းတယ် ငါဟာအကောင်းနဲ့ IDGAF ကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာ / ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲငါဟာလူတွေအတွက်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Cloud 9. ပေါ်မှာကလေးငယ်တွေလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကလေးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ညစ်ပတ်ပေမဲ့မြို့ပြလမ်းတွေတောင်မှချစ်စရာကောင်းပုံရတယ်၊
သေချာတာကငါအလုပ်ခွင်မှာအိမ်သာထဲမှာနှစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်မိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လပေါင်းများစွာက NoFap ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တုန်းကကျွန်တော့်ကိုဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ပုံမပေါ်ခဲ့ဘူး။
ငါသည်ငါ့အလုပ်ထွက်နဲ့ကျွန်မပြန် uni မှထွက်သွားသောအခါငါအချိန်ပိုမိုရှိခဲ့နဲ့ကျွန်မ wank ဖို့ပိုအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဒါပင်ပန်းမရခဲ့ပေ။
ငါ (ထိုမှော်နှစ်) ကို“ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏အံ့ဖွယ်အမှု” လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် PMO မစတင်မီ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည့်အတိုင်းထိုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်လွဲချော်ခဲ့သည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကြီးကြပ်သူကအရမ်းရယ်ရတယ်၊
ကျွန်တော့်ဘဝဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီးနောက်တစ်ဖန်ပြန်မရတော့တာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ငါအဲဒီအချိန်တုန်းကလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးပဲအစောပိုင်းအိပ်စက်ခြင်း၊ ကျန်းမာစွာစားခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဗီတာမင်များကိုရှောင်ရှားခြင်း။ ဒါပေမယ့် NoFap ဟာတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုပုံတူပွားလို့မရဘူး.
မနက်ဖြန်မှ စ၍ NoFap ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ အချို့သောယောက်ျားများသည်အခြားသူများထက်ပိုပြီးထိခိုက်မှုရှိ / မရှိမသေချာပါ။ ငါဟာမကြာခဏအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့ယောက်ျားတွေကိုသိပေမယ့်သူတို့ဟာမိန်းကလေးတွေရနေတုန်းပဲ၊ ပျော်ရွှင်နေတုန်းအားနည်းနေတဲ့ adrenals သို့မဟုတ် smth နဲ့မွေးဖွားလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါ PMO လုပ်သည့်အခါ, ငါမပျော်, စိတ်ဓာတ်ကျနှင့်မိန်းကလေးများမှမမြင်ရတဲ့လှည့်။ ယောက်ျားတွေလည်းငါ့ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ငါ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်ငြင်းဆန်။
ဒါပေမယ့်အိုဘုရားသခင်၊ ၂၀၁၃ နဲ့ ၉၀ နှစ်တွေကိုငါလွမ်းဆွတ်လွန်းလို့တကယ်ကြိုးစားရတော့မှာပဲ။
(မှတ်ချက်: ဤ Februray ရေးသားခဲ့, 2017)
LINK - NoFap ပြန် 2013 အတွက်ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏ပုံပြင်